मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिलोकतन्त्रमा नट–बल्टु अमान्य हरकत
अरे यार यो त हद भयो नि ! लोकतन्त्रको कत्रो उपहास !
लोकतन्त्रको सञ्चालन जनप्रतिनिधिमार्फत गरिने विश्वव्यापी प्रचलन हो । लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिमाथि विश्वास नगर्नुको विकल्प छैन । तर प्रदेश १ मा लोकतन्त्र र सङ्घीयताको जस्तो अभ्यास गर्न खोजिएको छ, त्यसबाट कन्टिर–बाबू दिक्दार देखिएका छन् । अरे यस्तो पनि हुन्छ, जनप्रतिनिधिका कुर्सीलाई ‘नाउठ’ बनाउने ?
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउने नाममा सभाकक्षका कुर्सीलाई उठाउन नसक्ने गरी फलामे पारसले कसेर नट–बल्टु कसिएको छ । कन्टिर–बाबूको विचारमा यो त कुर्सीलाई होइन जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रलाई नट–बल्टुले कस्ने हरकत हो । जनप्रतिनिधिले कुर्सी उठाएर तोडफोड गर्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर यो काम गरिएको भन्नु जनप्रतिनिधिकाई अविश्वास गर्नु र उनीहरूलाई कम आँकलन गर्नु हो ।
प्रदेशसभा सचिवालयले जनप्रतिनिधिले गलत र अशोभनीय काम नै गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न मिल्छ ? यो त नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास भएन र ? लोकतन्त्रलाई ‘फलामे लोकतन्त्र’मा परिवर्तन गर्न खोज्ने यस कृत्यप्रति कन्टिर–बाबू कति पनि सहमत छैनन् ।
अरे ‘धनशेर’बाबू सम्झाउनुस् आफ्ना कारिन्दालाई । तपाई नेता हो । भविष्यमा यस सन्दर्भबारे प्रश्न उठेछ भने जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने तपाईले हो, अरु त पानीमाथिको ओभानो हुन प्रयत्नशील हुनेछन् । तपाई चाहेर पनि उम्कन सक्नुहुन्न । यो सन्दर्भमा राजनीतिक र नैतिक दुवै दायित्वको निर्वाह नगरेको भनेर तपाईलाई आफ्नै आत्माले अनन्तकालसम्म पछ्याइरहनेछ ।
याद गर्नुहोला, राजनीतिमा कोही पनि न त स्थायी मित्र न त शत्रु हुन्छन् । भोलि तपाई आफैँ पनि कहाँ गएर मिसिने भन्ने निश्चित नहुन सक्छ । यस्तोमा तपाईले आफ्नै साथीलाई ‘गैरजिम्मेबार’ देखेर तिनका कुर्सीलाई नट–बल्टु कसेर बाँध्न मिल्छ ?
कन्टिर–बाबू छक्क परेका छन्– आखिर प्रदेश सचिवालय र धनशेरजीलाई लोकतन्त्रलाई कस्ने यो छक्कडबाजी आइडिया दियो कसले ? कन्टिर–बाबू त्यो छक्कडबाज खोजिरहेका छन् ।
नट–बल्टु नियन्त्रित लोकतन्त्र